Izimpawu ku kweNyuka: amasiko, izinkolelo, iholide emikhosini
Sekuyisikhathi eside Holiday futhi usuku kubalulekile ngamaKristu ezisungulwe ngosuku Agasti 28. Lezi zinceku zikaNkulunkulu ezithembekile lindela it ukubheka: ngokuhambisana izinkolelo waseBhayibhelini, ngalolusuku umphefumulo okumsulwa kakhulu washiya umzimba Virgin oNgcwele, "ephinde ebonana naye uzishaya iNdodana kaNkulunkulu." Ngalolusuku emhlabeni Orthodox futhi yazuza kakhulu molitvennitsu intercessor main eZulwini, futhi ikakhulu abantu igxilile izinkolelo nezibonakaliso kweNyuka.
amasiko Orthodox for the holiday
AmaKristu anomthwalo yosuku olukhulu kweNyuka we esandulele wemaviki lamabili okuthunyelwe. Amakholwa kufanele eside kwalesi sikhathi sokuzila into ethile alisho esiqinile futhi ezinzima, njengoba ngo-August, lezi zinqolobane ezazigcwele isivuno of imifino, izithelo, amantongomane nezinye izipho bemvelo, kuvunyelwe okuthunyelwe.
Holiday yaqanjwa lokuqala Iningi Pure futhi kubhekwa uswidi yangempela futhi isenzakalo esibalulekile, okuyinto ugcwele izinkolelo-ze. On Assumption uqede sokuvuna, kwakunokwenzeka ukuba ukujabula, sithokoze, ngokuba umoya usuku wasungula omangalisayo futhi ekhethekile.
Futhi kufanele ilungiselele kahle lolu suku:
ukuhlanza indlu ihlanzekile;
bakwemukele bonke labo zazizinkulungwane ukungavumelani;
umpheki futhi ezihlukahlukene elinomusa awukudla;
ukuqinisekisa ukuthula kanye nomkhathi yokwamukela endlini usuku lonke.
Ukuvinjelwa usuku olukhulu
Customs at Assumption ezihlobene umkhathi samaholide, kodwa futhi abonisa izici isikhathi ezithile zonyaka kwesikhathi ngonyaka.
Ngalolusuku abantu iboshelwe eziningi imikhawulo kufanele ngaso sonke isikhathi kumelwe kugujwe.
It okwakwenqatshelwe ngalolo suku ukusebenzisa ukubhoboza nezinto ukusika, ngakho kwetafula aliyona wacosha imfoloko nommese. Ukudla wazama ukulungiselela kusengaphambili ngayizolo, ngakho njengoba hhayi abaphazamisa ukuvinjelwa ezibalulekile.
Izimpawu ku umkhosi kweNyuka iNcasakazi eCwebileyo enqabela uhamba bengafaké zicathulo otshanini ngosuku. Ukuchazwa ukuvinjelwa enjalo linencazelo double: kholwa bakholelwa ukuthi amazolo ukuthi abawa ngalolo suku, kuba izinyembezi Virgin Ubusisiwe ukuthi owasuka ngalo ezweni, futhi akukwazi ukusiza abantu. Ngakolunye uhlangothi, emhlabeni selehlile kuze kube yilolu suku, nokho uhamba bengafaké zicathulo anganikela supercooling nezifo.
Kufanele ngokuqinile ulandele oda, ukuze ukukuthinta izinyawo izicathulo ungakhululekile ngosuku Wokuqala-Pure. Ngokusho abantu izinkolelo, ngale ndlela kwakunokwenzeka ukuba bazilethele izinkinga nezinkathazo.
Izimpawu ku kweNyuka elihlobene ne kokuqhuba imicikilisho yokusebenzelana ekhethekile nemikhosi. Usuku Energy Sekuyisikhathi eside kubhekwe a ekhethekile futhi eyingqayizivele, lesi isici ibenesandla oluqinisayo emasikweni abantu ezihlobene nale usuku ngo-August. Izimpande zawo yimikhuba isiko ungomunye walabo nemizana, elalingelamaFilisti amaholide Assumption umkhosi:
Ntambama, emva izikhalazo ethandaza Our Lady of abantu bebuthene maphakathi zokuhlala. Kusukela phezulu isithonjana okusezingeni eliphezulu udwendwe abantu baya endle futhi ngamemeza hlabelela imithandazo eNcasakazini uMariya, ukucula wonder Monger futhi umkhulumeli.
Phakathi nonyaka wenkonzo ekuseni esontweni yangcwelisa isinkwa, okumele wenze lokhu suku ensimini. Kube lwaphuka izinkwa ngayingcwelisa, badla nomhlaba wonke, ukuphuza amanzi angcwele. Kukholakala ukuthi ngale ndlela ungakwazi ukuqinisekisa yemikhiqizo nangonyaka olandelayo, kodwa-ke kwakudingekile ukuba eduze ukuqapha, kangangokuthi izwe kayiwanga isinkwa imvuthu.
Homemade emikhosini iholide
Ukuze ukuheha ekhaya kanye nomndeni inhlanhla, ukuchuma nokuphulukiswa ezifweni kufanele ubambe emikhosini ekhethekile ekhaya. izimpawu Good ukuze Assumption - Agasti 28 ukuze uhlanganyele isithonjana nge ubuso UnguNina KaNkulunkulu egcekeni, shiya lapho usuku lonke futhi qiniseka unake indawo yayo:
Face of the Virgin, obukele ngalolo suku aphume esangweni indlu, edonsela inhlanhla, inhlanhla nokuchuma.
Isithonjana UnguNina KaNkulunkulu maphakathi egcekeni kuzosiza ukuqeda zonke izifo ezihlupha umndeni.
Face of the Virgin kufanele ulethe endlini ngemva kwalokhu isithonjana bavikela umthandazo ekuseni. Indlu ovuthayo amakhandlela nezibani, izindleko edingekayo ukuze ubone ukuthi ikhandlela asicimi ngesikhathi iholide.
Isici esibalulekile kweNyuka kosuku Sekuyisikhathi eside libhekwe njengelingcwele izibonakaliso nemikhosi eyayenzelwa ukuqeda izifo lemikhuhlane.
ukuziphatha sifaneleka ikakhulu emikhosini enjalo kwakucatshangwa kulabo imindeni lapho umuntu nezibi kusukela amalungu omndeni. Isimo kubalulekile emikhosini yayiwukuthi, umuntu ogulayo kwadingeka bame ethempelini womthandazo uhambe udwendwe ngemuva isithonjana nge ubuso UnguNina KaNkulunkulu. Ngakho-ke, ngisho egula kanzima bazama qhubeka isithonjana, bese Uthwebule kwesiphambano futhi elicwiliswe iziwasho. Amaconsi ukuthi trickled wehle esiphambanweni, wafafaza umuntu ogulayo, izindawo kokufumbathisa yomzimba lapho ubuhlungu esiyitholayo ikakhulukazi kakhulu.
Abantu zazikholelwa ngobuqotho ukuthi ngale ndlela ungakwazi ukuthi uthole uvimbela nezifo eziningi, ikakhulukazi izifo ngisho namalungu emgogodleni - ngakho baphikisana izimpawu ku kweNyuka kaMariya. Agasti 28, ngosizo isiko enjalo aqede ubuhlungu bemisipha welulela, amalunga, arthrosis sikhubazekile, yalapheka ubuhlungu ukucindezeleka kwangemva kwenhlekelele ezingalweni nasemilenzeni.
Izimpawu enjabulweni yangasese
Girls nge ekhethekile ngabomvu iholide, njengoba ezinye zezimpawu Assumption abathembisa enjabulweni yakhe.
Ngemva kwenkathi Dormition Fast ethuthuka esidla inyama, intsha wazama ukubamba kuze kube intercession zingamtholi umngane womshado, uma kungenjalo ingozi emthonjeni ukuba umuntu ahlale yedwa.
Ukuze ozolandela isikhathi lalichuma, kanye nabantu abasha bakwazi ukuthola amanye ngamunye, izimpawu kazwelonke ku kweNyuka belulekwa kulezo izindlu lapho behlala amantombazane ongashadile, ukumboza ngesandla esivulekile amatafula aphathe zonke izivakashi kanye nezivakashi. Indlu Akufanele lizwakale ukuxabana, ukufunga, ngosuku emkhathini kufanele kube zemikhosi futhi egqamile.
ajabule kumele sihambisane bonke abantu abahlala endlini kusihlwa intsha okwakulindeleke ukubuthana intsha mibuthano.
Assumption - hhayi iholide esibaluleke kunazo zonke-Orthodox, kodwa kubalulekile kulabo ayohlala noNkulunkulu umphefumulo.
6 amaqiniso okumangazayo Day Valentine
Yini ngesiphambano iSt Peter?
Umphostoli uMathewu. Life of St uMathewu umPhostoli Evangelist
Ikhukhamba ecole F1: ukubuyekezwa, ukutshalwa technology, incazelo (izithombe)
Meaning of igama Adeline
Cliché - kungcono magic Wand
Ubani base wakhulela Romul mina iNsalela, abasunguli komuzi omkhulu kunayo yonke emlandweni wezwe
Anomalies zomzimba womuntu. Indawo egcina amagugu esizwe ngomzimba womuntu kwezinso
Buso Eye umbimbi: hydrogel Nezilwane
Bite Lungile: izimo yesondlo yayo nendlela uzilungise
Izinhlamvu ze-Chinese. Tattoos nencazelo yawo
Ngabe yini umphumela we iSivumelwano SaseVersailles? Imigomo iSivumelwano SaseVersailles
Indlela charm intombazane?